Abona bantu basulungekileyo i-RPG kunye neNightwinter Nights | I-Androidsis
Eyona RPG isulungekileyo kwi-Android evela kwiNightwinter Nights eyimbali: uHlelo oluPhuculweyo
AmaNightwinter angaze asebusika ngokuqinisekileyo asisisiseko seRPG ecocekileyo okanye iRPG onokuyifumana namhlanje kwaye ibisoloko yenye yezalathiso ngaphakathi kuhlobo. Ngokusekwe kwiiDungeons kunye neeDragons, i-RPG yaseMelika eyilelwe nguGary Gygax noDave Arneson, yapapashwa okokuqala ngo-1974.
Ngoku uyasiqonda isizathu sokuba i-Neverwinter Nights iqokelele eyona nto inyulu kolu hlobo. Kwaye kule mihla sinethamsanqa ube nakho ukuyithenga nge-2 euro kwiVenkile yokuDlala kuGoogleNgelixa ixabiso laso lihlala li- € 10. Ke ukuba ufuna umdlalo wabo ufuna isiqingatha seyure yakho ukufumana iziseko kunye nehlabathi lakho apho uya kuba ngumdlali ophambili, qhubeka.
1 Eyona ndima inyulu kwi-Android yakho ene-2GB yedatha
2 Ubusuku obungaze bubusika: uHlelo oluPhuculweyo kunye nabadlali abaninzi abakwi-Intanethi
3 Yenzelwe iselfowuni
Eyona ndima inyulu kwi-Android yakho ene-2GB yedatha
Ubusuku obungaze bubusika: uHlelo oluPhuculweyo izisa yonke imixholo yoqobo kwinguqulelo yakho yePC Ukuze sonwabe kwiDungeon kunye neeDragons ezisuka kwiselfowuni. Inguqulelo elungiselelwe ukunxibelelana ngescreen sokuchukumisa kwaye ekuntywila ngokuthe ngqo kwilizwe lokonwaba kunye nefantasy.
Kufuneka sitsho ukuba wonke umxholo weNeverwinter Nights usisusa kwiDiamond Edition kunye namaphulo ayo okuqala kunye neepakethe ezimbini zokwandisa. Uya kuba nakho ukugqitha izixeko eziyingozi, imingxunya ezele zizilo kunye nalo lonke uhambo lokuhlola amahlathi namathafa. Izithunzi ze-Undrenti kunye neeHordes ze-Underdark zibandakanyiwe. Kunye neemodyuli ezintathu zepremiyamu esinokuzithenga ukuze sibe neeyure ezingama-40 zamabali amatsha.
Elinye inqaku lokugcina engqondweni ngeeNightwinter Nights: uHlelo oluPhuculweyo kukuba ngumdlalo yenzelwe iitafile kunye neefowuni ubuncinci i-intshi ezi-7 yesikrini. Nangona uyidlala kwi-Galaxy S9 kwaye usandisa ubungakanani be-interface inokudlalwa ngokugqibeleleyo.
Ubusuku obungaze bubusika: uHlelo oluPhuculweyo kunye nabadlali abaninzi abakwi-Intanethi
Ukuba sithethile siya kudinga isiqingatha seyure kuphela kwezona zinto zisisiseko, Sithetha ukuba kuphela ekudalweni kweqhawe lethu apho kuya kufuneka sikhethe iklasi yakhe, ubuhlanga, iphakheji yomdyarho kwanothixo wethu esinokuthi silwe naye kwiimeko ezahlukeneyo ngokuchasene nenye okanye enye intshaba. Sicebisa ukuba uthathe lonke ixesha emhlabeni ukwenza umlinganiswa wakho, kuba indlela yokudlala iya kuxhomekeka kakhulu kuyo.
Siyayikhumbula loo nto I-Neverwinter Nights ithathwa njengeyona midlalo yokudlala indima igqibeleleyo kwimbali yevidiyo. Kungenxa yokuba isebenzisa phantse yonke imigaqo yoshicilelo lwesithathu lweeDungeons kunye neeDragons. Ngamanye amagama, iingxoxo kunye nabalinganiswa bonke odibana nabo, uphando ngezixhobo, usebenzisa izixhobo zokuhlwayela imbewu, ukwenza ubugcisa okanye ukuphucula umthi wobuchule, ziya kuba yinxalenye yexesha lonke lomdlalo iNeverwinter Nights eya kukuthatha.
Ukuba sele sidibanise ukuba eAbadlali abaninzi abakwi-Intanethi yenye yezona zinto zibalulekileyo Ubusuku obungaze buBusika: uHlelo oluPhuculweyo, ngoku ungakulungela ukonwabela zonke iintlobo zemidlalo apho uninzi, ngakumbi olo lukhokelwa yi-Master Dungeon, luya konwaba, lungalindelekanga kwaye luzele zonke iintlobo zobungangamsha.
Kwaye njani Singathetha iiyure malunga neeNightwinter Night, Siza kwenza ukwenziwa kwezinto okwenziwe ngokucacileyo kakhulu ukuze ukonwabele ukudlala indima enkulu kwifowuni yakho. Sineendlela ezimbini zokuhamba, ngokucinezela umhlaba okanye iintshaba / ii-npcs, okanye ukusebenzisa intonga. Ukuze sikwazi ukuvula ezinye iimenyu, kwaye ukuba sidlala ezinye iintlobo zeeklasi ekufuneka sizihlolile, ngokucinezela ixesha elide kutshaba, iindlela ezahlukeneyo ziya kuvela ukuhlasela okanye ukujonga.
Ubusuku obungaze bubusika: uHlelo oluPhuculweyo luphuculwe kunye nalapho kuya kufuneka sichithe ixesha elithile ukuze silubambe. Ngaba ibha yokufikelela ngokukhawuleza emazantsi kwaye kwicala lasekunene kwi-inventri, umlingo ... Inyaniso kukuba ayiyonto imbi kwaphela, nangona ibonisa ukuba ngescreen esi-7 okanye esi-8-intshi singayonwabela ngcono yonke indima edlala indima kulo mdlalo I-Android.
Ngokobuchwephesha yenziwa kakuhle kakhulu kwaye sinako konke oko kunambitheka kobusuku bokuqala beNeverwinter, nangona kunjalo. Sinokhetho lokumisela yonke into ngemizobo, ke ukuba uqaphela nakuphi na ukungasebenzi, unokunciphisa amaxabiso ukuze wonwabe ngakumbi kulo mdlalo wokudlala indima. Iswele ukwenziwa kwayo kunye nohlaziyo lokuyiphucula, kodwa njengoko injalo, isisa ngqo kumava omdlalo wonke esiwulindeleyo kwaye ngayo yonke into edlalwa ngabadlali abaninzi.
Ubusuku obungaze bubusika: uHlelo oluPhuculweyo alukho ngeSpanish, nangona luza kufika kwinguqulelo entsha njengoko kubonisiwe ngumvelisi. Umdlalo ozisa konke ukubaluleka kwendima emsulwa yeeDungeons kunye neeDragons kwaye abalandeli balolu hlobo lomdlalo abanako ukuthi hayi. Ukufika okuhle kwi-Android, kanye njengaleyo ikwiRunescape kwiiveki ezidlulileyo, ukuba neentlobo ezahlukeneyo zemidlalo.
Ubusuku obungaze bubusika: uHlelo oluPhuculweyo
Eyona ndima inyulu kwiselfowuni yakho
Abadlali bayo abaninzi kubalulekile
Umsebenzi omkhulu wenziwe ngokubanzi
Ayilungiselelwe i-18: imiboniso ye-9
Akukho ngeSpanish okwangoku, kodwa iya kuza
ixabiso: € 1,89
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Eyona RPG isulungekileyo kwi-Android evela kwiNightwinter Nights eyimbali: uHlelo oluPhuculweyo
Ngoku ungalifezekisa iphupha lakho kwaye unike eyona nkonzo ibalaseleyo kubemi besibhedlele iMini
Kufuneka wenze ntoni xa ufumana umyalezo kwiGoogle Play Store uyekile kwi-Android